Cumar Filish oo mar kale mucaaradka u digay uguna yeeray kuwa u adeegaya shisheeye | Xaysimo
Home War Cumar Filish oo mar kale mucaaradka u digay uguna yeeray kuwa u...
Cumar Filish oo mar kale mucaaradka u digay uguna yeeray kuwa u adeegaya shisheeye
Maamulka gobolka Banaadir ayaa diginin iyo hanjabaad cusub u jeediyey musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ah, maalmo kadib markii duqa Muqdisho Cumar Filish oo aayado qur’aan ah u adeegsaday in xubnahaas la dili karo.
Warqad xalay saq-dhexe kasoo baxday maamulka ayaa looga jawaabay qoraalkii ay musharaxiinta uga fal-celiyeen hanjabaaddii dil ee Cumar Filish, waxaana maamulka uu musharaxiinta ku tilmaamay “kuwo u adeegaya shisheeye.”
“Maamulka Gobolka Banaadir waxa uu aad uga xunyahay Qoraalka lagu faafiyay baraha bulshada ayna soo saareen qaar ka mid ah murashixiinta Madaxweynanimada dalka 2021, oo lagu qoray eed iyo cambaarayn aan sal iyo raad lahayn oo loo jeediyay madaxda qaranka ee dalka iyo Guddoomiyaha Gobolka loona tarjumay si khaldan, iyadoo ay murashixiinta ka lahaayeen qoraalkooda dano gurracan oo u adeegayo shisheeye,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Maamulka farriin u muuqata hanjabaad u diraya musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in xaqiijinta amniga iyo xasiloonida caasimadda dalka “ay tahay waajlb sharci uuna u xilsaaran yahay hirgalintiisa guddoomiyalta gobolka Banaadir ahna Duqa Muqldsho.”
“Maamulka gobolka Banaadir waxa uu mar walba ka digayaa hab dhaqan kasta (Hadal iyo Ficil), ee dhiirigalinaya dib u dhac iyo xasilooni darro taasoo keeni karta natiijo aan la mahadin, mana ogolaanayo maamulka Gobolka marnaba in ay taasi dhacdo,” ayaa lagu yiri qoraalka.